» जिग्मे छ्योकी घिसिङ बाहिरिएकै हो ?
जिग्मे छ्योकी घिसिङ बाहिरिएकै हो ?
२ पुष २०७८, शुक्रबार २०:११
मकवानपुर, २ पुस । सारेगमप लिटिल च्याम्पस नेपालमा यो साता उत्कृष्ट ९ प्रतियोगीहरु छनौट हुँदैछन् । उत्कृष्ट ९ छनौटअघि यो साता नै उत्कृष्ट १० प्रतियोगीहरुको दमदार प्रस्तुति पनि रहनेछ । यसैबिच सारेगमप लिटिल च्याम्पसले यही शुक्रबारको २१ औँ एपिसोडको लागि प्रोमो सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रोमोबाट शोकी चर्चित प्रतियोगी जिग्मे छ्योकी घिसिङ बाहिरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । प्रोमो अनुसार शोकी होष्ट रिमा विश्वकर्माले यस हप्ताको बटम थ्री मञ्चमै रहेको बताउँछिन् । त्यसपश्चात निर्णायक र दर्शक स्तब्ध हुँदै रिजल्ट सुनिरहेको देखिन्छ भने जिग्मेको आँखामा आँशु देखिन्छ । यसबाट दर्शकहरुले जिग्मे शोबाट बाहिरिएकी हुन् कि भनेर अनुमान गरेका छन् ।
प्रोमो देखिए अनुसार आँशु झार्दै गरेको समयमा जिग्मेको मुहारमा थोरै मुस्कान पनि देखिन्छ । यसबाट उनी बटम थ्रीमा मात्रै परेर सुरक्षित भएको हो कि भनेर अनुमान पनि लाउन सकिन्छ । तर मिठो आवाज भएकी जिग्मे रोएको देखेपछि दर्शक श्रोताहरुले उनी बाहिरिएको हो कि भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनको बारेमा कमेन्ट गर्दै दर्शकहरुले जिग्मे जस्तो राम्रो आवाज भएकी गायिका शोबाट बाहिरिन नहुने बताएका हुन् । के साँच्चै जिग्मे बाहिरिएकै हुन् त ? यसबारेमा थाहा पाउन भने शुक्रबार र शनिबारको दुबै एपिसोड कुर्नुपर्ने भएको छ । सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट १० मा पुगेकी दोस्रो प्रतियोगी हुन् जिग्मे छ्योकी घिसिङ । उनले गत साता निर्णायकबाट ५० अंक र दर्शक भोटबाट ४८.७ अंक गरी जम्मा ९८.७ अंक प्राप्त गरेकी थिईन् । उनले उत्कृष्ट ११ छनौटको क्रममा पहिलो पटक बटम थ्रीको सामना गरेकी थिईन् । १३ वर्षीया जिग्मे दोलखाको सैलुङ निवासी हुन् ।
शोमा यो साता चर्चित गायक हेमन्त राना र चर्चित कलाकार कर्माले पनि प्रस्तुति दिँदैछन् । शोमा गत साता बाहिरिएका चर्चित प्रतियोगी आदित्य विश्वकर्माको पनि प्रस्तुति रहनेछ । यी नै विविध कारणले गर्दा यो साता सारेगमप लिटिल च्याम्पस नेपाल निक्कै रोचक हुने देखिएको छ । दर्शकहरुले यो साताको एपिसोड २१ र २२ कुरिरहेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–